China abụrụla onye na-emepụta ngwa ngwa na onye na-ebupụ ngwaahịa na-efe efe dịka ndị masks na uwe nchebe | Sinnovation
Akwụkwọ poli akpa
Kpara na-abụghị kpara ọtụtụ ihe mejupụtara nkwakọ
Profiled mmiri mmiri nkwakọ ngwaahịa
Aluminom foil / aluminom ihe nkiri nkwakọ
Eyi valvụ akpa
Pee valvụ n'ọdụ ụgbọ mmiri nkwakọ
General Pee nkwakọ
Fibc / nnukwu akpa
Pictlọ ọrụ hoto
China abụrụla onye na-emepụta ngwa ngwa na onye na-ebupụ ngwaahịa na-efe efe dị ka ihe nkpuchi na uwe nchebe
N'ihi nchịkwa dị irè nke coVID-19 n'ụlọ na mmụba dị ukwuu na ikike mmepụta dị mkpa, China abụrụla onye na-emepụta ihe na onye na-ebupụ ihe masks, uwe nchekwa na ngwaahịa mgbochi ọrịa ndị ọzọ, na-enyere ọtụtụ mba ụwa aka ịlụ ọgụ megide ọrịa ahụ. Ewezuga China, dị ka akụkọ ndị bipụtara nke ndị nta akụkọ Global Times si kwuo, ọ bụghị ọtụtụ mba ma ọ bụ mpaghara ka na-aga n'ihu na-ebupụ ọgwụ ọgwụ.
Akwụkwọ akụkọ New York Times kwuru n'oge na-adịbeghị anya na ihe nkpuchi nke China kwa ụbọchị si na 10 nde malite na mmalite nke February ruo nde 116 nanị izu anọ ka e mesịrị. Dabere na akụkọ nke General Administration of Customs of The People's Republic of China, site na Machị 1 ruo Eprel 4, ihe dị ka ijeri ihe dị ka ijeri 3.86, nde mmadụ nde 37.52, ndị na-enyocha infrared nde 2.41, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ 16,000, nde ikpe 2.84 nke akwụkwọ akụkọ Coronavirus. nchoputa ihe nyocha na nde 8,41 nke enyo anya abuo di na mba niile. Ndị isi nke Ngalaba Azụmaahịa Ọzọ nke Mịnịstrị ahụ kpughere na ka ọ dị na Eprel 4, mba na mpaghara 54 na mba ụwa atọ abanyela aka na nkwekọrịta azụmaahịa maka ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị China, yana mba 74 ọzọ na ndị otu mba iri na-azụ ahịa. mkparịta ụka ịzụ ahịa na ụlọ ọrụ China.
N'adịghị ka China meghere maka mbupụ nke ọgwụ, ọtụtụ mba na-amachibido mbupụ nke nkpuchi, ikuku na ihe ndị ọzọ. N’akụkọ ewepụtara na ngwụcha ọnwa Machị, Global Trade Alert Group na Mahadum St Gallen dị na Switzerland kwuru na mba na mpaghara 75 etinyela mmachi na mbupụ ngwa ahịa. N'ebe a, ọ bụghị ọtụtụ mba ma ọ bụ mpaghara na-ebupụ ọgwụ ahụike. Dabere na akụkọ mgbasa ozi, 3M nke US wepụrụ ndị nkpuchi na Canada na mba Latin America na nso nso a, New Zealand zigakwara ụgbọ elu na Taiwan ka ha buru ọgwụ. Na mgbakwunye, ebuputara ụfọdụ ihe nkpuchi na ihe nnwale si na South Korea, Singapore na obodo ndị ọzọ.
Lin Xiansheng, onye isi ndi na emeputa ihe banyere ogwu nke di na mpaghara Zhejiang, gwara ndi Global Times na Mọnde na mbupu nke China nke nkpuchi na ihe nchedo na-aritu elu uwa nile, na -enwe obere mmuba na mbupu nke ndi ikuku na ndi ozo. Ejiri akara ụghalaahia nke ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche nke mba ọzọ mara ụghalaahia, mana ihe a na-emepụta n'ezie ka dị na China. ” Maazị Lin kwuru na dịka ọnọdụ dị ugbu a na mkpa a na-achọ na ahịa mba ụwa, China bụ ikike kachasị na ngalaba nke mbupu ọgwụ.
Post oge: Jun-10-2020
Anyị bụ ndị ọkachamara na-masks, disinfectants, bacteriostatic ngwọta, ndu bacteria, ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ nnyocha na mmepe, mmepụta na ahịa nke elu-tech ụlọ ọrụ.
Adress: West nke Youai ụzọ na n'ebe ugwu nke Yongkang n'okporo ámá, Weifang Economic Development Mpaghara
Ekwentị: + 86-18653608018
Mkpịsị aka nitrile
China abụrụla onye na - emepụta ihe na ...
China emewo ka iwu sie ike na ...